तीन दिनलाई बोलाइएको माओवादी भेला ८ दिनमा पनि सक्न मुश्किल :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
तीन दिनलाई बोलाइएको माओवादी भेला ८ दिनमा पनि सक्न मुश्किल
नेकपा माओवादी केन्द्रले पुस ११ देखि १३ गतेसम्म प्रथम सम्मेलन गर्ने भनेर १७ सय ४२ प्रतिनिधिलाई काठमाडौंमा जम्मा गरेको थियो। तर सम्मेलन सुरू हुनु एक दिनअघि यसलाई आठौं महाधिवेशन भनेर नाम दियो।
प्रथम सम्मेलनका लागि भनेर तयार पारिएका प्रतिनिधि परिचयपत्र, लोगो रातारात परिवर्तन गरिए। महाधिवेशन गर्ने भनेपछि कार्यक्रम अवधि दुई दिन थपेर १५ गतेसम्म पुर्‍याइयो। तर थपिएको समयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलसमेत सकिएन।
त्यसपछि माओवादीले पुस १७ गतेसम्मका लागि प्रज्ञा भवनको हल भाडामा लियो। यसबीच शनिबार विधान पारित भएपछि माओवादीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली र निर्वाचन कार्यतलिका सार्वजनिक गर्‍यो।
कार्यतालिका सार्वजनिक गरे पनि निर्वाचन गर्ने सोच माओवादी नेतृत्वसँग छैन। प्रक्रिया भने पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता छ।
दुई सय ९९ केन्द्रीय सदस्यको चयन सहमतिकै आधारमा गर्न माओवादी स्थायी कमिटीले प्रदेशहरूसँग नाम मागेको छ।क्लस्टरका आधारमा प्रदेशहरूले नाम दिनुपर्नेछ। नाम आएपछि त्यसलाई अन्तिम रूप दिएर महाधिवेशनको हलमा पेस गरिन्छ। हलले पारित गरेपछि केन्द्रीय सदस्यहरूले उम्मेदवारी दिन्छन्।
कुनै व्यक्तिले असहमति राखेर उम्मेदवारी दियो भने त्यस्ता क्लस्टरअन्तर्गतको केन्द्रीय सदस्यका लागि निर्वाचन हुन्छ।
कतिपय प्रदेशले केन्द्रीय सदस्यहरूको नामका लागि छलफल गर्न बाँकी छ भने कतिपयले नाम बुझाइसकेका छन्।माओवादी केन्द्रकी कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले आफूहरूले सहमतिका लागि केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम तयार पारिसकेको बताइन्।
'पार्टी अध्यक्षले आज राति भइसक्यो, भोलि थप छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्छ भन्नुभएको छ,' उनले भनिन्, 'पदाधिकारीको समेत टुंगो लगाउने गरी प्रयास गरेका छौं भनेर अध्यक्षले भन्नुभएको छ। महाधिवेशनले पदाधिकारीको समेत टुंगो लगाउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।'
केन्द्रीय सदस्य लुमनी धिमालले प्रदेश २ बाट केन्द्रीय सदस्यहरूबारे छलफल भइरहेको तर टुंगो नलागेको बताए।
'हामी भोलि थप छलफल गर्छौं। बन्दसत्र सुरू हुनुअघि नाम तय गर्छौं,' उनले भने, 'सहमतिबाटै नाम प्रस्ताव गर्छौं।'
स्थायी कमिटी सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेतले छलफल गर्दै जाँदा टुंगो लगाउन राति हुने भएकाले उज्यालोमा प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको बताए।
'छलफल गर्दै जाँदा राति भयो। त्योभन्दा उज्यालोमै प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने भयो,' उनले भने, 'प्रदेशहरूबाट नाम आएर एउटा प्यानल तयार हुने स्थिति छ। भोलि बिहानसम्म गृहकार्य गरेर सकेसम्म पदाधिकारी टुंगो लगाउने कोशिस गर्छौं।'
सहमतिबाट नाम प्रस्तावको प्रयास गर्ने भनेर नै उम्मेदवारी दर्ताका लागि समय सारिएको हो। यसअघि शनिबार ८ देखि साढे १० बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ताका लागि समय तोकिएको थियो। अब त्यो समय आइतबार २ बजेदेखि साढे ३ बजेसम्मका लागि तोकिएको छ।
कुनै एक क्लस्टरमा मात्रै निर्वाचन भयो भने पनि मतदानका लागि साँझ ६.२५ देखि दुई घन्टा छुट्टयाइएको छ। त्यस्तो अवस्थामा आइतबार पनि महाधिवेशन नसकिने निश्चित छ।
पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले महाधिवेशनको बन्दसत्र हलमै सहमति नभए लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जाने भनेकाले केही ठाउँमा निर्वाचन हुन सक्ने देखिएको छ।
'अध्यक्षले लिस्ट सार्वजनिक गर्नुभयो भने त कसले उम्मेदवारी दिने हिम्मत गर्ला? तर प्रदेश कमिटीले ल्याएको लिस्टमा आफ्नो नाम परेन भने उम्मेदवारी पर्न पनि सक्छ,' एक केन्द्रीय सदस्यले भने, 'आफूले दबाब दियो भन्ने नपरोस् भनेर नै उहाँले प्रदेशलाई जिम्मा दिनुभएको हो। उहाँले प्रतिनिधिबाट केन्द्रीय सदस्य चुनिऊन् भनेर हस्तक्षेप नगर्न पनि सक्नुहुन्छ।'
प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस १७, २०७८, १२:४४:००
फेरि माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष बने प्रचण्ड
केन्द्रीय कमिटीले माओवादीको पदाधिकारी छान्ने, आज बैठक
माओवादी महाधिवेशन: श्रीमान्-श्रीमती नै केन्द्रीय सदस्य
प्रचण्डले ताली बजाउनुस् भने, प्रतिनिधिहरूले बजाए, महाधिवेशन सकियो
प्रचण्डले प्रस्ताव गरे २३६ सदस्यको नाम, केन्द्रीय सदस्यहरूमा को को परे? (सूचीसहित)